Ungamtsala njani uMfazi we-Aquarius onamagama kunye neZenzo - Ihambelana Astrological Signs
Ungamtsala njani uMfazi we-Aquarius onamagama kunye neZenzo
Unokuthatha isigqibo sokuba ungatsala njaniUmfazi we-Aquariusngamazwi akho kunye nezenzo ezisekwe kwi-zodiac yakheiimpawu zobuntu. EziIimpawu zinokusebenza njengezikhombisiukuba ungasondela njani kwaye uphendule kumfazi wase-Aquarius.
Fumanisa ukuba ungatsala njani uMfazi we-Aquarius ngamagama kunye nezenzo
Umfazi wase-Aquarius uyathanda ukuzibandakanya ngengqondo. Ukuqala kwakho ukudibana, kufuneka ubonakalise umdla wakho kwiingcinga nakwizimvo zakhe. Nyaniseka kwaye unyaniseke.
Iindlela zokuVula iAquarius Male
Ukuthandwa kwe-Aquarius kunye nokungathandwa
Indlela yokuLukuhla iiAries
Awufuni ukubeka onke amakhadi akho etafileni xa uqala ukudibana nomfazi wase-Aquarius. Uphendula ubuqhetseba nayo nayiphi na into ebamba umbono wakhe. Ngaba unomdla ngokwaneleyo ukwenza oku ngaphandle kokubeka umoya wobuxoki?
Iileta ezimnandi zothando kumfana wakho
Umfazi wase-Aquarius akangomntu unxibelelana nayeuphawu lomoyaIGemini, kodwa akoyiki xa kusiziwa kumagama. Uthanda iingxoxo ezimnandi kwaye unomdla wokuva uluvo lwakho, ke qiniseka ukuba unayo oyivakalisayo. Akukho nto imcimayo ngaphandle komntu ongenazigqibo okanye ongakhange athathe umdla owaneleyo kwisihloko ukwenza uluvo.
U-Aquarius uthanda nantoni na ecela umngeni kubukrelekrele bakhe. Unombono onomdla kwaye uyakuthanda ukuphonononga ngengqondo yakhe, ezinje ngezihloko ze-esoteric, iifilosofi ezingaphandle kodonga, nayo yonke into engaqhelekanga.
Yintoni ejonge umfazi wase-Aquarius kuMthandi
Umfazi wase-Aquarius ufuna umthandi ozithembileyo kunye nobomi obupheleleyo. Ufuna isithandwa esingumntu wabo kwaye esingafuni ukuba asizalisekise. Esi simo sengqondo siyakukubeka kwinqanaba lokudlala ngokude ungazami ukumtshintsha.
Yima ngaphandle kwesihlwele
Umfazi wase-Aquarius uqokelela abahlobo. Okukhona abahlobo bakhe bemanyene, kokukhona ebonwabela. Uyabazisa ubuntu obukhethekileyo kunye nabantu abaphila ubomi obungaqhelekanga. Ukuba unqwenela ukutsala umfazi we-Aquarius, kuyakufuneka ukuba wahluke ngendlela yakho. Ungaze ubeke umoya okanye uzenze into ongeyiyo. Uyakuyibona into oyenzayo ngokukhawuleza.
Njengophawu lomoya, awuyi kufumana umfazi wase-Aquarius ozinikele kwimisebenzi yasekhaya okanye nayiphi na into ayijonga njengesiqhelo. Wazalelwa kwiindawo ezonwabisayo kunye neenkcubeko ezizodwa. Mazise kwinto entsha kwaye uya kuyiphumelela ngokukhawuleza.
Umfazi wase-Aquarius akazukunyamezela ukubiyelwa okanye ukubotshwa. Umona yinto embi kwingqondo yakhe yokuthanda inkululeko. Kuya kufuneka ahlale enenkululeko yokwenza nantoni na engqondweni yakhe. Amathuba kukuba, uyakukucela ukuba uhambe naye okoko engaziva uzama ukumlawula.
Ukubonakala kunye noBuntu
Umfazi wase-Aquarius akayikhathazi kangako ngenkangeleko yakho. Ngapha koko, unomdla ngakumbi kwingqondo yakho. Ufuna ukwazi ukuba ucinga ntoni kwaye uvavanya njani ngengqondo ubomi ngokubanzi.
Uzibonakalisa njani kwiLizwe
Kumfazi wase-Aquarius, ezona mpawu zibalulekileyo kuye yindlela ohamba ngayo ebomini, indlela oziphatha ngayo, obaphatha ngayo abanye, kunye nezinto eziphambili ngokubaluleka kuwe.
Uyathandeka kwaye uQinisekile
Umfazi wase-Aquarius unombono oqinisekileyo ngobomi kwaye ungumbuki zindwendwe onesisa kakhulu. Uyakonwabela ukonwaba kwaye uyazi ukuba ulunge kangakanani na nesihlwele. Ukuba unokuba bhetyebhetye kwiimeko zentlalo, uya kukuqaphela ngokukhawuleza.
ukucoca njani isikrini esweni
Umtsalane kwaye uyathandana
Ukubaungadlala ngothando, Uyakufumana u-Aquarius oshushu kakhulu. Umfazi wase-Aquarius akayonto yokudlala ngudadewabo waseGemini, kodwa uyawuthanda umdlalo wengqondo yengqondo yesini. Ungumntu othandekayo onomdla kwaye uyonwabisa kwaye ulindele ukuba ubuxabise ubuchule bakhe ngokuthatha inxaxheba kothando oluncinci.
Ukuba unokufumana into angakhange ayenze eyinto enomdla, uya kuba nomdla wokuphuma kunye nawe ngomhla. Yenza umhla wakho ulula kwaye uzaliswe kukuzonwabisa. Inokuba yinto elula njengokuya kumnyhadala wamaGrike, undwendwela ivenkile ekhethekileyo yeti yokunambitha iti okanye ukuya kuvulo olukhulu lwegalari yobugcisa.
Uthando kunye nezothando
AnUmfazi wase-Aquarius uyakonwabela ukuthandana, ngakumbi xa ibandakanya izidlo zekhandlela, umculo kunye neentyatyambo. U-Aquarius ufuna aumphefumlo wokweneneezinokuhamba ngokuzonwabisa kwaye ngamanye amaxesha zingenanjongo ebomini zikhangele i-adventure elandelayo.
Sebenzisa amagama kunye nezenzo zakho ukuTsala uMfazi we-Aquarius
Ungatsala umdla womfazi wase-Aquarius xa ukhetha amagama akho ngobulumko kwaye uqinisekise ukuba izenzo zakho ziyinyani kwindalo yakho. Logama uvumela u-Aquarius ukuba abe nguwe kwaye uphephe ukumgweba okanye ukumgxeka, unokuba nolwalamano oluhlala ixesha elide.
Ikrisimesi Imbali Njenesithethe Ukuthweswa Izidanga Umtshato Wokuziphatha Ikhitshi Uhlaziyo Ubugcisa Professional
mingaphi iminyaka ekufuneka ubenayo ukuze ufumane itatoo e-iowa
Athini amazwe angama-50 kunye nezihloko?
ikati etyebileyo emhlabeni
iglasi ye-antique egobile iglasi yekhabhinethi ixabiso
diy yonke into yokucoceka ngenjongo yotywala